Football Khabar » रियल मड्रिडको ‘मूलबाटो’मा एमबाप्पे : सरुवा रकममा बन्दैछ विश्व रेकर्ड !
रियल मड्रिडको ‘मूलबाटो’मा एमबाप्पे : सरुवा रकममा बन्दैछ विश्व रेकर्ड !
स्पेनको क्लब रियल मड्रिडले आफ्नो क्लब मात्रै नभएर विश्व फुटबलको इतिहासमै सर्वाधिक ठूलो सरुवाको योजना बनाएको छ । स्पेनको पत्रिका ‘एएस’का अनुसार रियल निकट भविष्यमै हाल फ्रेन्च क्लब पिएसजीबाट खेलिरहेका युवा सुपरस्टार केलियन एमबाप्पेलाई ऐतिहासिक सरुवाका रूपमा अनुबन्ध गर्न स्पष्ट रूपमा अघि बढेको छ ।
हाल २१ वर्ष पुगेका एमबाप्पेलाई रियलले २०२०–२१ को सिजन सकिएसँगै अनुबन्ध गर्न अहिलेबाटै तयारी थालेको छ । सन् २०१७ मा फ्रान्सकै क्लब मोनाकोबाट पिएसजी पुगेका एमबाप्पे अहिले पिएसजीमा तेस्रो सिजन बिताइरहेका छन् ।
हाल २१ वर्ष पुगेका उनलाई रियलले २०२१ मा २३ वर्षको उमेरमा भित्र्याउने ‘मास्टर प्लान’ बनाएको छ । त्यसका लागि रियलले आगामी समर सिजनमा खेलाडी किनबेचमा ठूलो काम गर्नेछ । अर्थात्, रियलले अबको समरमा टोलीका केही प्रमुख युवा खेलाडी बेचेर अर्को सिजनका लागि रकम जम्मा गर्नेछ ।
रियल २०१८ को विश्वकपविजेता खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेर क्लबमा कम्तीमा एक दशकका लागि गोलकर्ता खेलाडी सुरक्षित गर्ने योजनामा छ । यस्तो ठूलो योजना पूरा गर्न रियलले विश्वकीर्तिमानी बजेट खर्चनेछ ।
पिएसजीले २०२१ का लागि रियललाई आफ्ना खेलाडी बेच्न ३०० मिलियन युरो मूल्य राख्न सक्ने चर्चा छ । यदि रियलले ३०० मिलियन आसपास खर्चिए खेलाडी सरुवा इतिहासमा नयाँ रेकर्ड बन्नेछ ।
रियलले यसअघि सन् २००९ मा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडबाड ९६ मिलयन युरोमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गरेको थियो । अब रियल एमबाप्पेलाई रोनाल्डोकै उत्तराधिकारीका रूपमा अर्को कीर्तिमानी बजेट खर्चिर अनुबन्ध गर्न तयार छ ।
हाल रियलका प्रशिक्षक फ्रान्सकै जिनेदिन जिदान छन् । र, उनले एमबाप्पे सरुवालाई थप सजिलो बनाउनेछन् । यसबाहेक एमबाप्पे आफैं पनि रोनाल्डोलाई आफ्नो करिअरको आदर्श मान्ने हुनाले उनले रियलको जर्सी लगाउने करिब–करिब पक्का छ ।
प्रकाशित मिति १० पुष २०७६, बिहीबार १८:२७